မြစ်ဆုံ: သင်၏ နာမည်ကပြောပြသော သင်.အကြောင်း
သင်၏ နာမည်ကပြောပြသော သင်.အကြောင်း
နာမည်ကောင်းတစ်ခုစီတိုင်းတွင် ဗျည်း၊ သရတို့ဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီး ထိုဗျည်းသရတို့တွင် တန်ဖိုးများ သတ်မှတ်ထားရှိသည်။ ဗျည်းသရတို့၏ တန်ဖိုးများကို အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထား၏။
၁။ အ၊ ဥ၊ေ၊ါ၊ -ိ၊ -ီ၊ -ု ၊ -ူ၊ဲ၊ံ၊့ -် ၊း= ၈
၂။ က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င = ၅
၃။ စ၊ ဆ၊ ဇ၊ ဈ၊ ည = ၆
၄။ ယ၊ ရ၊ လ၊ ၀၊ -ျ(ယပင်း)၊ြ- (ယရစ်)၊ -ွ (၀ဆွဲ) = ၃
၅။ ပ၊ ဖ၊ ဗ၊ ဘ၊ မ = ၁
၆။ သ၊ ဟ၊ -ှ (ဟထိုး) = ၂
၇။ တ၊ ထ၊ ဒ၊ ဓ၊ န = ၇
၈။ ဋ၊ ဌ၊ ဍ၊ ဎ ၊ဏ = ၄
နာမည်တစ်ခု၏ ဗျည်း သရတန်ဖိုးများ အားလုံးကိုပေါင်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့် နာမည်တစ်ခု၏ စုစုပေါင်းဂဏန်းတန်ဖိုးကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ရရှိလာသော စုစုပေါင်းဂဏန်းကို(၈)ဖြင့်စားခြင်းဖြင့်အကြွင်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ရရှိလာသော အကြွင်းပေါ်မူတည်၍ နာမည်အဟောများ ကိုဖတ်ကြည့်နိုင်ပါသည်။
ဥပမာ- ကျော်ဟိန်း = (၈+၅+၃+၈+၈) + (၂+၈+၇+၈+၈) = ၃၂ + ၃၃
၆၅ / ၈ = အကြွင်း(၁)
အကြွင်း(၁) တံခွန် နာမည်အဟော
တံခွန်နာမည်မျိုး ခေါ်တွင်ခံရသူများသည် ကျော်ကြားအောင်မြင်သူများဖြစ်မည်။ အနုပညာဖြင့် အောင်မြင်
လိမ့်မည်။ လူအများနှင့် ဆက်နွယ်ပတ်သတ်နေပြီး အများကိုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ အုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်ရသူဖြစ်မည်။
တစ်ခုထက်မကသော အလုပ်အကိုင်များကို တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ကိုင်ရသူဖြစ်မည်။ သေလျှင်သော်မှ နာမည်
ကျန်ရစ်မည်။ ထိုနာမည်မျိုးများသည် အတိုက်အခံနှင့်ယှဉ်၍ အောင်မြင်တတ်ကြ၏။
အကြွင်း (၂) အခိုး နာမည်အဟော
အခိုးနာမည်သည် သြဇာအာဏာတည်တတ်၏။ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးတွင် တိုးတတ်သည်ထက် တိုးတက်အောင် စနစ်တကျလုပ်တတ်၏။ လူအများနှင့်စပ်ဆိုင်သော အလုပ်များကို လုပ်ကိုင်တတ်၏။ လုပ်ချင်သည့်လုပ်ငန်းကိစ္စများကို မဖြစ်မနေလုပ်တတ်မည်။
အကြွင်း(၃) ခြင်္သေ့ နာမည်အဟော
ခြင်္သေ့နာမည်သည် လူသိများမည်။ နေရာမရ ရအောင်ကြိုးစားမည်။ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမည်။ အာဏာတန်ခိုးကြီးမည်။ ထိပ်ကိုရောက်ပြီး ပြန်ဆင်းတတ်သည်။
ကျားနာမည်သည် အတက်အကျမြန်တတ်၏။ ကံတရား၏ဘီးကဲ့သို့ ကောင်းတာလုပ်လျှင် ကောင်းကျိုးခံစားရမည်။ ဆိုးတာလုပ်လျှင်ဆိုးကျိုးခံစားရမည့် နာမည်ဖြစ်သည်။ အတိုက်အခံနှင့်ယှဉ်၍ အကျိုးပေးတတ်၏။စိတ်ကူးကို အကောင်အထည်ဖော် တတ်၏။
နွားနာမည်ရှင်သည် လူအများ၏ အသုံးချခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။ အများအတွက်အနစ်နာခံရမည်။ အခွင့်အလမ်းကောင်းများတွေ့ရမည်။ ရန်သူ၏ အတိုက်အခိုက်ခံရမည်။
အကြွင်း(၆) မြင်း နာမည်အဟော
မြင်းနာမည်သည် အလုပ်အမျိုးမျိုးတို့ကို လုပ်ရမည်။ လှုပ်ရှားမှုများမည်။ အတက်အကျအမြဲရှိမည်။ သေးငယ်သောပြဿနာမှ ကြီးမားသော မှုခင်းများထိဖြစ်တတ်သည်။
ဆင်နာမည်သည် ရေရှည်စီမံကိန်းချပြီး လုပ်ရသည့် လုပ်ငန်းများတွင် အောင်မြင်အကျိုးပေးမည်။ ဘ၀ကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ လျှောက်လှမ်းရမည်။ဖျော်ဖြေမှု အနုပညာလုပ်ငန်းများဖြင့် အကျိုးပေးမည်။
အကြွင်း (၈) သို့ (၀) လင်းတ နာမည်အဟော
လင်းတနာမည်သည် ငုပ်လိုက်ပေါ်လိုက် ဖြစ်နေမည်။ ကိုယ့်အကြံအစည်ကို သူများလုပြီးလုပ်ခြင်းကိုခံရတတ်သည်။
အရှက်တကွဲ ဖြစ်ဖို့လွယ်မည်။ စိတ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတတ်မည်။ ဆရာသမားလူကြီးများအတွက်အနစ်နာခံရမည်။
Posted by မောင်မောင် at 13:17
22 August 2012 at 07:04
မြတ် တွက်ချက်ပြီးနောက် ဝမ်းနည်းပက်လက်ဖြစ်ပြီး ပြန်သွားသည်။ :(
23 August 2012 at 06:58
don't understand 65/8 got 1? how this is calculate? LOL
29 August 2012 at 06:08
if you can send me your name to my email address , i can calculate for you . thank
အကြွင်း(၂) တဲ့ တော်တော်လေးကိုတိုက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောရမယ်
ဖြစ်ချင်တာရှိတိုင်း မဖြစ်မနေ လုပ်တတ်လွန်းလို့
6 September 2012 at 17:25
c box မှာခြေရာချန်လို့မရဖြစ်နေတယ်
နက်လိုင်းမကောင်းလို့ လို့ ထင်တာပဲ
6 September 2012 at 17:45